Manaova sarontava tarehy ao an-trano, zarao amin'ny hafa koa: PM mankany BJP
NEW DELHI: Ny praiminisitra Narendra Modi dia nangataka ny laharan'ny BJP sy ny fisie mba hizara sarontava amin'ny olona farafaharatsiny 5-7 ary hitafy azy ireo any an-trano mihitsy aza, raha azo atao. Niatrika ny kadre BJP tamin'ny alàlan'ny rohy video tamin'ny andro fototra faha-40 an'ny antoko ny alatsinainy lasa teo, dia nanao fangatahana dimy isaky ny mpikambana i Modi. Izy emp ...
Tokony hampiharina amin'ny fomba hentitra ny fanaovana sarontava, ny fanalavirana ny fiaraha-monina:
New Delhi: Ny minisiteran'ny tokantranon'ny Union tamin'ny alakamisy dia nilaza fa misy lalàna sasany toy ny fanaovana sarontava tarehy, fanazaran-tena lavitra ary tsy misy fivoriana misy olona dimy na mihoatra tokony hampiharina amin'ny toerana hentitra mba hahazoana antoka fa mihidy ny hidin-trano mba hahitana ny fihanaky ny coronavirus dia implem ...
Maharashtra mandrara ny mivoaka tsy misy sarontava
Ny governemanta Maharashtra dia namoaka didy ny alarobia teo izay mandrara ny olona tsy hivoaka ny tranony raha tsy misy sarontava, fivoarana izay nateraky ny fitomboan'ny isan'ny tranga voamarina fa ny Covid-19 any amin'ny tanàna toa an'i Mumbai sy Pune. Ny kaomandy dia namoaka voalohany ny kaomandy ...
Nahazo fiovana ny sanganasan'i Banksy; 'Ankizivavy miaraka amina sofina voaporitra
LONDON: Nohavaozina ho an'ny vanim-potoanan'ny coronavirus i Banksy's "Girl with a Pierced Eardrum" miaraka amin'ny sarontava sarontava manga. Ny sary hosodoko, fakana sary an'ilay tovovavy holandey Johannes Vermeer “Girl with a Pearl Earring” fa miaraka amin'ny alarme fanoloana ny pear ...
Chandigarh: Ireo hita tsy misy saron-tava amin'ny toerana ampahibemaso
Izay tratra tsy misaron-tarehy amin'ny toerana ampahibemaso dia hosamborina, hoy ny fitantanan-draharahan'ny Chandigarh tamin'ny baiko navoakany ny alakamisy teo. Ny fitondrana UT tamin'ny talata teo dia namepetra ny olona hisaron-tava amin'ny toerana be olona hijerena ny fiparitahan'ny coronavirus. Araka ny didy navoaka ...